We Will Haunt You – Poem… – PVTV Myanmar
We Will Haunt You – Poem…
We Will Haunt You – Poem
Like – 8.8K Share – 690
မိုး စက္ အိမ္ says:
2021-06-04 at 5:28 PM
Nay Zar says:
2021-06-04 at 5:29 PM
Khaing Ko says:
2021-06-04 at 5:36 PM
ဘဲပစ်မ ပြောင်ကြီး says:
2021-06-04 at 5:38 PM
အင်တာနက်လိုင်း ပျက်သွားပီတဲ့ မြန်မာ ပြည်က သူငယ် ချင်းက လှမ်းပြော ပါ တယ်
Ivy Zue says:
2021-06-04 at 5:42 PM
Sarah Aung Myint. ချစ်တီရေ 😍
2021-06-04 at 6:08 PM
YanPaing YP says:
2021-06-04 at 6:17 PM
2021-06-04 at 6:18 PM
Htike Gyi says:
2021-06-04 at 6:21 PM
အရေးတော်ပုံ ငါတို့အားလုံးဧကန်မုချ အောင်မြင်ရမည်။
2021-06-04 at 6:29 PM
Yoon Waddy says:
2021-06-04 at 6:37 PM
2021-06-04 at 6:52 PM
စခတွေ ခွေးကျင့်ခွေးကြံနဲ့ လိုင်ဖြတ်သွားတယ်
2021-06-04 at 6:56 PM
Anty Hla says:
2021-06-04 at 7:18 PM
ေလလိူင္းထဲက အစိုးရဆိုအခုေတာ့လည္း ေလထဲကေျပာမွာကို ဖင္တုန္ေအာင္ေၾကာက္ေနၾကတယ္
2021-06-04 at 7:24 PM
#BREAKING All the internet lines will be shutdown at5PM local time for an hour in #Myanmar: ISPs say.
ယနေ့ညနေ ၅ နာရီမှ စပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အင်တာနက်လိုင်းများအား တစ်နာရီကြာပိတ်သွားမည်ဟု အင်တာနက်ကုမ္ပဏီများထံမှ သိရသည်။ ညနေ ၅ နာရီ မှ
Dediang Thein Htay San says:
2021-06-04 at 7:25 PM
2021-06-04 at 7:27 PM
Cathy Tun says:
2021-06-04 at 7:43 PM
Ma Nan Moe says:
2021-06-04 at 7:44 PM
Zin Aung Phyo says:
2021-06-04 at 7:47 PM
🙏🙏🙏 ေအာင်ပါ ေစ
Thwe Thwe says:
ဒီညနေ ၅:၀၀ ကြောက်ချီးပန်းပြီးinternet ဖြတ်တာက်ိုသာကြည့်တော့ဟဟ
2021-06-04 at 9:47 PM
ခက္မိႈင္းညိဳ႕ ခက္မိႈင္းညိဳ႕ says:
Hero Ko says:
2021-06-04 at 10:06 PM
သက္ ထား ေလး says:
2021-06-05 at 12:24 AM
2021-06-05 at 6:28 AM
စစ် ကောင်စီနဲ့ခင်ညွန်အကြမ်းဖက်သမားများ အသေဆိုးနဲ့တယောက်မကျန် သေပါစေ မြန်မြန် သေပါစေ
2021-06-06 at 8:35 AM
2021-06-08 at 9:50 AM
MEG Protest (June 4/2021)
နည်းပညာအခက်အခဲ အချို့ကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစီအစဉ်အား Live ထုတ်လွှင့်ရန် အဆ…